यस्तो ठाउँ जहाँ छ सय कुकुरले आत्महत्या गरिसके ! (भिडियो)
आत्महत्या कस्ले गर्न सक्छ ? जहाँ सम्म मान्छे चेतनशील प्राणी भएर पनि आत्मा हत्या गर्छन ,तर यस्तो एउटा ठाउँछ त्यहा कुकुरले आत्महत्या गर्छन । स्कटल्यान्डको एउटा पुलबाट कुकुरले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । पूलवाट हाम्फालेका कुकुर आजसम्म फर्किएका छैनन् । त्यहाँ कुकुर आत्महत्याका लागि उत्प्रेरित हुने गरेका छन् ।
स्कटल्यान्डको डन्बार्टन नजिकैको मिल्टन गाउँमार रहेको ओबरटन पुलमा एउटा यस्तो स्थान जहाबाट बढी आत्महत्याको घटना भएको तथ्यांक छ । ५० फिट उचाईको पुलको भागबाट फाल हाल्ने गरेको कुकुरमध्ये सायदै कमै मात्र बाँचेका छन् । सन् १९६० यता पुलबाट छ सय कुकुरले आत्महत्या गरिसकेको तथ्यांक रहेको छ ।
अन्य स्थानमा कुकुर देखि सावधान लेखिन्छ तर त्यहाँ कुकुरले आत्महत्या गर्ने गरेको ले कुकुरलाई राम्ररी लान सुझाब दिइन्छ । कुकुरका लागि सावधान अपनाउन लेखिएको छ । त्यहाँ भूतप्रेत रहेको विश्वास गर्नेहरु पनि छन् ।
सन् १९९४ मा एक व्यक्तिले आफ्नो बच्चालाई यसै पुलबाट तल फालिदिएका थिए । त्यहाँ यहि घाटनाको चर्चा हुन्छ । जसमा उक्त बच्चा एन्टी क्राइस्ट थियो र केहि महिना पछी बच्चा फाल्ने व्यक्तिले समेत त्यहि पुलबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका थिए ।